Izingqinamba zimqinise ukhakhayi onemikhiqizo esinabele nakwamanye amazwe. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uPhiello Tsotetsi uwumsunguli weTsotetsi’s Batlokwa Detergents, ayiqale ngo-2019, nakuba eze walibhalisa ngokusemthethweni ngo-2020. Lo somabhizinisi waseFrankfort, eFree State, kodwa osezinze eGauteng, wayedayisa izisefo zamanzi engakaliqali ibhizinisi.
Ukuhlangana nomuntu onolwazi kwamtshengisa uhlobo lwebhizinisi olusha. “Wangikhombisa ukuthi ngingadayisa imikhiqizo yokuhlanza izakhiwo, ngase ngaqala ngadayisa ekhiqizwe ngezinye izinkampani,
“Ebona uthando lwami wangikhuthaza ukuthi ngifundele ukuyihlanganisa imikhiqizo KwaZulu-Natali. Kwakungelula ngoba ngangisebenza, kwakumele ngihambe njalo ngiye eKZN kodwa ngakwazi ngoba ngangigqugquzelwa wuthando lwami lokuyihlanganisa le mikhiqizo.
Eminye yemikhiqizo yeBatlokwa Detergents
UTsotetsi uthi umkhiqizo wokuqala awuhlanganisa kwakuyinsipho yokuwasha izitsha ewuketshezi wabe esedlulela kweminye imkhiqizo njenge-pine gel, i-all-purpose cleaner, i-shampoo, i-thick bleach, ama-greaser, izimonyo zomzimba neminye.
Kepha wathi ezama ukufaka imikhiqizo yakhe ezitolo ezinkulu zokudla wachithwa ngoba kuthiwa kufanele imikhiqizo yakhe ibe ne-barcode.
Wahamba wayocwaninga ngaloku, kwathi esekwenzile wabuyela ezitolo. Kodwa baphinde banqaba bamtshela ukuthi kufanele imikhiqizo yakhe ihlolwe. “Ngangingazi nokuthi imkhiqizo yami ngizoyihlola kanjani futhi ngizoyihlola kuphi ngoba uma bekutshela isinqumo sabo abakutsheli uzoya kuphi futhi uzokwenza kanjani,” usho kanje ekhuluma neVutivi News.
“Yizona zinsuku engafunda ngazo ukubaluleka kokwenza ucwaningo uma uwusomabhizinisi ngoba kwakumele ngibuyele emuva futhi ngithole ukuthi imkhiqizo yami ngingayihlola kuphi kanjani,” kulanda yena.
UTsotetsi wathatha imkhiqizo yakhe yayohlolwa eNyuvesi yaseLesotho eyayiphasisa, wase ethola isitifiketi. Le mizamo yaqala ukuzala impumelelo, emva kwaloko waqala wadayisela izitolo ezihlukene imikhiqizo yakhe eNingizimu Afrika nasemazweni aseningizimu ye-Afrika.
“Imikhiqizo yami isemashalofini aseTFS Wholesaler, iSefalane Wholesaler naseCentral Supermarket; ziseFrankfort zombili,” kusho uTsotetsi.